Sideen U Soo Degsado Video YouTube Ah? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sideen u soo dejisan karaa fiidiyaha YouTube-ka?
April 28, 2021 0 comments 435
Sideen fiidiyow uga soo dejisan karaa YouTube? Waad la yaabi lahayd inta jeer ee dadku tan ka raadiyaan maalin kasta adduunka oo dhan. Google, maalin walba, waxaa jira kumanaan raadintaan ah, runti, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato markii aad oraahda "sida loo soo dejisto" u dhex gasho mashiinka raadinta, seddexda ugu horeysa waxay la xiriiraan shabakadan bulshada.
Maxay su'aalo badani uga jiri doonaan arrintaas? Fudud, dhibaatadu waa taas YouTube ma ogola in laga soo dajiyo fiidiyaha barnaamijkeeda duruuf kasta ha noqotee, inaad sidaa sameyso, waxaad noqon laheyd milkiilaha gabalka taas macno badan ma sameyn doonto.
Sidaas oo ay tahay, bogag badan iyo horumarinta webka Wuxuu ku guuleystey inuu hareer maro sharuudaha iyo shuruudaha YouTube-ka waxa ugu yaabka badan ayaa ah in qaab gebi ahaanba bilaash ah oo aan dhibaato weyn qabin.
Barnaamijyada soo dejinta
Waxaa jira barnaamijyo dhowr ah, softiweerro ama barnaamijyo lagu soo dejinayo fiidiyow YouTube ah, in kastoo qaar badan oo ka mid ah la bixiyo, ama lagu qoro, qaar baa had iyo jeer ka madax bannaan lacag-bixin ama shuruud kasta.
Kuwaas waxaa tusaale u ah VLC, App si aad u daawato fiidyowyada, kuwaas oo waxaad kala soo bixi kartaa bilaash internetka, kaliya adoo raadinaya magaceeda biraawsarka aad jeceshahay. Marka la rakibo, waxay kuu ogolaaneysaa, xulashooyinkeeda, inaad sifeyso fiidiyow gaar ah adoo dhajinaya xiriiriyaha.
Intaa kadib, VLC waxay ku siin doontaa xiriiriye cusub oo aad ku dhajin doonto biraawsarkaaga oo aad siin doontid. Fiidiyowga Way kuu muuqan doontaa adiga oo aad xaq u yeelan kartaa guji, keydso sida.
Ma sameyn karaa barnaamij la'aan?
Waxaad awoodi kartaa kala soco videoga inaad toos uga baahan tahay internetka, laakiin sidee? Iyada oo loo marayo tallaabooyin aad u fudud oo hoosta ayaan kuu sheegi doonaa:
Raadi on YouTube fiidiyowga aad rabto oo aad ku ciyaareyso ama nuqul ka sameyso URL-keeda.
Ka raadi biraawsarkaaga asalka ah "soo dejiso fiidiyow YouTube ah"
Isku day qaar ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya ee ka muuqda hoosta iyo qolka barxadda gudaha ee shabakadda soo-bixidda, ku dheji iskuxirka aad horey u koobiyeysay.
Xullo qaabka aad rabto in faylkaaga loo kaydiyo, haddii ay tahay on videoWaad dooran kartaa tayada tan, tan ugu hooseysa illaa tan ugu sarreysa, in kasta oo ay si dhib leh u muuqaneyso inay ufiicantahay sida asalka ah, laakiin waa loo dhowaan karaa.
Sug goobta decode fiidiyowgaaga oo sii ikhtiyaarka soo dejinta.
Wax ay tahay inaad maskaxda ku hayso marka waqti la soo dejiyo nooc ka mid ah feylasha ku jira bogagga noocan ah, ayaa ah inay sida caadiga ah muujiyaan tiro badan oo xayeysiis iyo xayeysiis ah, kuwaas oo xaalado badan oo faylal xun ah oo lagu soo dejisto kombuyuutarkaaga.
Si aysan waxba u dhicin lama filaan ahHad iyo jeer xusuusnow inaad antivirus-kaaga caadiga ah aad firfircoon tahay oo waligaa guji ama ha galin noocyada xayeysiiska ah, maxaa yeelay ma ogid waxa aad ka heli karto jidka.
Dhanka kale, waxba ma dhacaan haddii aad si kama 'ah u furto mid ka mid ah adigoon raalli ka ahayn, waa inaad si dhakhso leh u xidho ama u xirato xayeysiis xayeysiin ah, si loo soo afjaro dhibaatooyinkaas xaqiiqdii
1 Barnaamijyada soo dejinta
2 Ma sameyn karaa barnaamij la'aan?
Abuuritaanka xisaab Facebook ah
Sidee ayey u shaqeeyaan bot-yada Telegram-ka?